International Philanthropy uye charity magweta - Law & More
Kana munhu akasarudza kutanga kupa rubatsiro, imwe yematanho ekutanga akakosha kusarudza fomu yakakodzera yepamutemo. Mutemo weDutch unoziva masangano akasiyana anokwanisa kushanda se fomu yepamutemo yekupa: hwaro hweDutch uye mubatanidzwa wechiDutch. Nheyo yeDutch inowanzo kusarudzwa pakutanga rudo. Hunhu hweiyo danho reDutch ndechekuti haina nhengo. Chaizvoizvo, iyo danho reDutch rinongofanira kuva nechinhu chimwe chete: bhodhi revatungamiriri.
Kumbira ROPA REMAHARA
Kana munhu akasarudza kutanga kupa rubatsiro, imwe yematanho ekutanga akakosha kusarudza fomu yakakodzera yepamutemo. Mutemo weDutch unoziva masangano akasiyana anokwanisa kushanda se fomu yepamutemo yekupa: hwaro hweDutch uye mubatanidzwa wechiDutch.
Nheyo yeDutch inowanzo kusarudzwa pakutanga rudo. Hunhu hweiyo danho reDutch ndechekuti haina nhengo. Chaizvoizvo, iyo danho reDutch rinongofanira kuva nechinhu chimwe chete: bhodhi revatungamiriri. Nheyo yeDutch inotarisira kuzadzisa chinangwa chaicho sezvakataurwa muzvinyorwa zvekubatanidzwa. Chinangwa ichi chinogona kuzadzikiswa nekuwana mipiro, kuitisa bhizinesi kana kunyorera rubatsiro. Pamusoro pezvo, zvinorambidzwa kuti hwaro hwekuparadzira purofiti kune vanotangisa, ivo vanhu vanouka chikamu chemitezo yayo nevamwe vanhu. Iri rekupedzisira ( Nheyo ine vanopa kana vanozvipira. Muchokwadi, vanhu ava havana kodzero dzekuvhota. Uyezve, nheyo inogona kunge iine dzimba dzisingazununguki, kuita zvikwereti, kupinda muzvibvumirano uye kuvhura maakaundi ebhengi. Nheyo inogona kuitawo zviitiko zvekutengesa.
Kusafanana nehwaro, mubatanidzwa une nhengo, dzakabatana muMusangano Mukuru. Musangano Mukuru uyu une huwandu wakakura wemasimba, sezvo iri pakati pevamwe vane basa rekugadzwa uye kubviswa kwevatungamiriri. Pamusoro pezvo, izvo zvinyorwa zvekubatanidza zvinogona kungogadziriswa neMusangano Mukuru. Mubatanidzwa haugone kugovera purofiti pakati penhengo dzayo. Saiwo hwaro, mubatanidzwa unogona kuita zviitiko zvepamutemo sekutenga nzvimbo. Iyo yekupedzisira ndeye, zvisinei, inorambidzwa kuitira kana mubatanidzwa unogona kuonekwa sesangano risina kurongeka.
Pakati penheyo uye kusonganirana ikoko kunogona kuve nemisiyano mune zvinogona kuve zvinzvimbo zvevatungamiriri.
Law & More ine ruzivo mukutungamira uye kubatsira kushanda kwechiDutch uye kwenyika dzese zvivakwa zvevasori kana vatengi vega vane ruzivo rwekunzwisisa uye zvinangwa.
Isu tinopa zano nezvekugadzira, kutanga uye kunyoresa machipatimendi echiDutch uye zvisiri-zvakanaka nheyo. Kubatsira kwedu kunoenderera kune zvese zvikamu zveDutch mutero, pamutemo, kutonga uye kugadzirisa nyaya dzekupokana.
Iwo masevhisi e Law & More
Wese muzvinabhizimusi ane chekuita nemutemo wekambani. Zvigadzire zvakanaka izvi.